နေ့စဉ်ကုသိုလ်စုတဲ့ အလေ့အကျင့်လေး လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို - Cele Gabar
ပိုပိုကတော့ တေးရေးတေးဆိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ ဝါသနာပါရာ ဂီတခရီးကို လျှောက်လှမ်းလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး “ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ” တေးစီးရီးလေးနဲ့ ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ။
သူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့ အခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့အပြင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူ့ရဲ့အိမ်လေးမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်လေးတွေနဲ့ ပျော်စရာအချိန်လေးတွေ ဖန်တီးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ကာလကတည်းက ရောဂါကို မမှုဘဲ သံဃာတော်တွေအတွက် နေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းပေးနေသူ ပိုပိုကတော့ ဒီကနေ့မှာ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ကုသိုလ်စုတဲ့အကျင့်လေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “နေ့စဉ်ကုသိုလ် စုတဲ့ အကျင့်လုပ်ပေးပါတယ်…. ဒါန- နေ့စဉ် အိမ်ရှေ့ တန်းဆွမ်း လှူပါတယ်( ကိုယ်တိုင်ချက်လှူပါတယ်,ခွေးကလေးတွေ အစာကျွေးပါတယ် နွမ်းပါးသူများကို အစားအစာ ပိုက်ဆံ အဝတ်စား ကြုံရင်ကြုံသလို လှူပါတယ်) သီလ -ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းပါတယ်… မေတ္တာပွားပါတယ် စိတ်ဖြူအောင် တတ်နိုင်မျှ ပြုပြင်ပါတယ်.. သရဏဂုံ တည်ပါတယ်… သမထ အနည်းငယ်ကျင့်ပါတယ်…. ဤကုသိုလ်အကျိူးများကို နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုပါတယ်” ဆိုပြီး မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
ပိုပိုကတော့ ဒါန၊သီလ၊ ဘာဝနာ ဘက်စုံမျှအောင်အားထုတ်နေတဲ့အပြင် နေ့စဉ်ကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြောင်းမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေ… အသက်ရှင်သန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ပိုပိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ လေးစားစရာပါပဲမို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post ညိုထွေးဇာတ်ရုပ်ကိုအသက်ဝင်ပီပြင်စေတာကြောင့် ချီးကျူးမှုတွေကိုရရှိနေပြန်တဲ့ မေမီကိုကို
Next post အချစ်သီချင်းကောင်းလေးကို Music Video အနေနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်